ओमकार टाइम्स सुनको मूल्य दिनदिनै बढ्दै ! हेर्नुस् कति पुग्यो ? – OMKARTIMES
सुनको मूल्य दिनदिनै बढ्दै ! हेर्नुस् कति पुग्यो ?
काठमाडौं। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ।
मंगलबार पनि सुनको मूल्यले नयाँ उचाई कायम गर्दै प्रतितोला ६८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूल्य बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो । पछिल्लो पाँच दिनयता सुनको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै आएको खबर आजको कारोबार दैनिकमा लक्ष्मी सापकोटाले लेखेकी छन्।